Isethaphu esuselwe kusendlalelo sezindlela zokupheka ze-winetricks
Iwayini isetshenziselwa ukwenza izinhlelo ze-windows ku-linux. Isikhathi sokusebenza sisebenza ngokuqalisa kabusha dlls ukusebenzisana ne-linux. Noma kunjalo isoftware ayidingi nje imitapo yolwazi eyisisekelo, kunokuncika okudinga ukufakwa kuyo yonke ingxenye yesoftware.
Iwayini lisekela izinhlobo zamawindows ezahlukahlukene ... (zonke?), Ngakho-ke kuyadingeka ukusebenzisa izindawo ezahlukahlukene ukuqinisekisa ukusebenzisana phakathi kwezinguqulo zesoftware namawindows.
Okunye ukuncika kungahle kungahambelani komunye nomunye, ngakho-ke ukusetshenziswa kwe- Isiqalo sewayini . Sebenzisa iziqalo zewayini kusho ukuthi imvamisa uhlelo ngalunye lunendawo yalo, (njengeziqukathi), okusho ukuthi konke ukuncika kufanele ifakwe kabusha Uhlelo ngalunye olusha . Awunazo futhi, izinhlelo ezahlukahlukene zingabelana ngemvelo efanayo, kepha njengoba kushiwo, kungavela izinkinga ezinzima ukulungisa iphutha.
I-Winetricks isebenzisa ukufakwa kokuncika (njengamaphakheji we-NET ne-DirectX), kepha, noma ngabe kubhaliwe, ama-setups asengathatha isikhathi esithile.
Ostree isetshenziselwa ukuphuma izinhlobo ye izinhlelo zokusebenza . Futhi noma ngabe icala layo lokusetshenziswa eliyinhloko linika amandla ukuthuthukiswa kwe-athomu kuma-OS afakwe ku-bare-metal, kungasetshenziselwa ukwakha Isiqalo sewayini ngokuqoqwa kokuncika okufakwe ngaphambili izikhathi zokudlala iwayiniyemindeni yesoftware eyabelana ngobuningi bokuncika; okuwukuphela kombuzo osele ukuthi uma kukhona izinkinga zelayisense ezihambisa lezo zikhathi zokudlala nalokho obekungaba ngempumelelo isoftware yamawindows efakwe ngaphambili . : S
Thumela Amathegi: izibani ezikhanyayo, i-linux
Julayi 25, 2021